2021 Gawaarida Airwoods Sanadka Cusub
Fasaxyadu waxay umuuqdaan kuwo si gaar ah sanadkaan uga dareeraya wixii socda. Aafadu waxay sii wadaa inay adduunka ka sii dhigto shaki, saamaynta ay leedahay waxaa wada dareemaya dhammaanteen, gaar ahaan iyo xirfad ahaanba. Aad baan kaaga mahadcelinaynaa kalsoonidaada, fahamkaaga ...
Airwoods Webinar ： Nadiifinta Naqshadaynta & Dhismaha Soosaarida Maaskarada La Tuuri Karo
Maaddaama faafitaanka baaxadda leh ee 'Covid-19', baahida loo qabo maaskarada la iska tuuri karo mar walba way sii kordheysaa. Macaamiil fara badan ayaa ka fiirsanaya soo saarista maaskaro, waana fahamsanahay inay ku xirnaan doonaan su'aalo badan haddii ay rakibayaan nadiifinta markii ugu horreysay. Taasi waa ...
Xarunta Xakamaynta Cudurrada PCR Cleanroom Virtual tour
Ku soo biir maareeyayaashayada mashruucyada ee Wayne iyo Fauna si aad ugu dalxiis tagto meeliheena cusub ee la dhisay ee ISO 8 PCR ee loogu talagalay xarunta xakamaynta cudurada deegaanka. Booqo websaydhka wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan mashaariicda. Mashruuca: Xarunta Xakamaynta Cudurada PCR Nadiifinta; Codsiga: Fayrasyada Tijaabada T ...
Mashruuca Airwoods: Qolka Nadiifinta Soosaarida Maaskarada La Tuuri Karo
Arjiga Nadaafada: Warshadda Warshadaha Soosaara ee Warshadda Warshadaha Isugeynta Guud Ahaan: 546m2 Goobta Nadaafadda: 440 m2 Aagga Daboolka Nadaafadda: Aqoon-isweydaarsiga wax soosaarka, Qolka Isbedelka Ragga / Dumarka, Qolka Dhaqmada, Wadada, Qalabka Qolka, Qolka alaabta ceyriinka ah, qolka kala-furidda, .
Mashaariicda Airwoods: Xarunta Xakamaynta Cudurada PCR Nadiifinta
Mashruuca: Xarunta Xakamaynta Cudurada PCR Nadiifinta; Codsi: Fayrasyada Tijaabada Si Loo Ogaado Cudurka; Heerka nadaafada: ISO 8 HVAC Nidaamka: 100% unugyada qaboojinta hawada cusub + unugyada isku ururaya Waqtiga dhismaha: 30 Maalmood Aagga Dhismaha: 150m2 Ilaa 2007 ， Airwoods heegan ah ...
Airwoods PCR Nadiifinta Goobta Hordhaca
Korodhka ballaaran ee imtixaannada PCR ayaa ka dhigaya shaybaarka PCR mawduuc kulul ee warshadaha nadaafadda. Airwoods, waxaan sidoo kale ku aragnaa kororka weyn ee su'aalaha sheybaarka PCR. Taasi waa sababta aan u duubnay fiidiyowgaan hordhaca ah si aan u sharaxno astaamaha sheybaarka PCR-yada aasaasiga ah. Nagu soo biir ...
PCR Lab Challenge & Solution - 8/12 Airwoods Webinar Highlight
Bandhigga tooska ah ee tooska ah ee 'Alibaba' ee tooska loogu muujiyo. Sidee loo xalliyaa wasakhda wasakhda hawada iyo dhibaatada qulqulka hawada ee sheybaarka PCR? Maamulaheena mashruuca Wayne wuxuu ku bixiyaa caqabad iyo dulmar guud aragtida fiidiyowyadan gaagaaban. Tan iyo 2007 ， Airwoods heegan u ah t ...
Dulmarka Shirkada - 8/12 Airwoods Webinar Highlight
Bandhigga tooska ah ee tooska ah ee 'Alibaba' ee tooska loogu muujiyo. Wakiilka Airwoods Wayne wuxuu si kooban u soo koobay Airwoods mashaariicdii dhismaha PCR ee la soo dhaafay. Laga soo bilaabo 2007 ， Airwoods oo u heellan inay siiso xalal hvac dhammaystiran warshadaha kala duwan. Waxaan sidoo kale bixinnaa profe ...
Joogtee cadaadiska hawada PCR Lab - 8/12 Airwoods Webinar Highlight
Bandhigga tooska ah ee tooska ah ee 'Alibaba' ee tooska loogu muujiyo. Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee shaybaarka PCR ayaa ah inuu sii wado cadaadiska hawada shaybaarka. Maamulaheena mashruuca Weyne wuxuu siinayaa aragti guud xalka webinarkeena 12-ka Ogosto. Laga soo bilaabo 2007 ， Airwoods oo loogu talagalay inay bixiso hvac s ...
Qiimaha qolka shaybaarka PCR - 8/12 Airwoods Webinar Hightlight
Bandhigga tooska ah ee tooska ah ee 'Alibaba' ee tooska loogu muujiyo. Mid ka mid ah su'aalaha sida joogtada ah loo weydiiyo macaamiisha ayaa ah qiimaha sheybaarada PCR. Maamulaheena mashruuca Wayne wuxuu bixiyaa xisaab xisaabeed ku saleysan khibradeena Shiinaha iyo Dibadda. Tan iyo 2007 ， Airwoods oo loogu talagalay p ...
La shaqee Airwoods - 8/12 Airwoods Webinar Highlight
Bandhigga tooska ah ee tooska ah ee 'Alibaba' ee tooska loogu muujiyo. Sidee loola shaqeeyaa Airwoods? Ku soo biir maareeyahayaga mashruuca Wayne wuxuu sharaxay nidaamkayaga shaqada ee Shaybaarada PCR. Laga soo bilaabo 2007 ， Airwoods oo u heellan inay siiso xalal hvac dhammaystiran warshadaha kala duwan. Waxaan sidoo kale bixinaa prof ...
Alibaba Liveshow: Waa maxay qolka nadiifinta ee PCR?
Waqtigan xaadirka ah Imtixaannada hadda jira ee 'Covid-19' ee dhammaan warbixinnada ay ka imanayaan waxay adeegsanayaan PCR. Korodhka ballaaran ee imtixaannada PCR ayaa ka dhigaya shaybaarka PCR mawduuc kulul ee warshadaha nadaafadda. Airwoods-ka, waxaan sidoo kale ku aragnaa kororka weyn ee shaybaarka PCR ...